Iindaba -Ukusika kunye nokukhawulezisa ukuHanjiswa okuDibeneyo
Indlela yokusika kunye nokukhawulezisa ukuHanjiswa okuDibeneyo
Njengoko umfanekiso ophezulu ubonisiwe, mhlawumbi indawo yakho iyafana nale, ayiqhelekanga kwaye ufuna ukuyilwa ngesitayile esahlukileyo.Kodwa umzi-mveliso we-WPC osoloko ekuxelela ukuba baya kuvelisa imveliso enye okanye ezimbini kunye nobude obude. Ezi, unokucinga ukuba uyilo lwakho alunakufezekiswa.Ungakhathazeki, ukuhlanganiswa kwe-WPC kunqunyulwa ukulungelelanisa izincedisi zeenkcukacha ezahlukeneyo, ukudityaniswa kwakhona kungachetywa, kubethelelwe, kubethelelwe.Ngokufanelekileyo jonga ezi ngcebiso zingezantsi, uya kuthi ngokulula yenze wedwa.
Unokwenza ukusika umnqamlezo ngokulula Ukuhombisa okudityanisiweyongendlela efanayo onokuthi usike nayiphi na ipayini ethambileyo-isarha yamandla esetyhula iya kusebenza kakuhle. Isarha yamandla ombane inokubonelela ngokuchanekileyo, ngokusika ngokuthe tye, kunye netafile ebonwe ngenkxaso yenkxaso inokwenza zonke iintlobo zokusika zibe lula. Kucetyiswa iincakuba ze-Carbide-amazinyo ambalwa kulungele ukusikwa okungagudanga. Sukuvumela ii-blades ukuba zishushu ngokugqithiseleyo xa zisikwa njengoko oku kunokubangela ukusikeka ukuba kulungiswe okanye kujiwe.
Ukuba ukufaka i-decking ejikeleze isakhiwo esele sikhona, i-router elula ingasetyenziselwa ukwenza ukusikeka okugobileyo. Ukusikwa okucocekileyo akufuneki kushiye nayiphi na into yenkunkuma, kodwa ukuba ufuna ukucoca umphetho, cebisa ukuba ungasebenzisi isander. AbakwaSanders bayakukugqiba ukugqiba kwaye kwiimeko ezininzi bayilahle iwaranti yakho. Isarha yokukopisha ngesandla iya kusebenza kakuhle ekugqibeleleni imiphetho egqityiweyo ukuba iyafuneka Unokusika ukuhonjiswa ngaphandle njengengqondo yakho, kufuneka ulumke!
Isithuba esongeziweyo sibalulekile phakathi kweebhodi kwaye apho iibhodi zidibana nodonga xa kushenxiswa kuqhutywa ngokungqinelana nodonga. Phakathi kweebhodi zokugqibela ukuya esiphelweni, vumela indawo ye-3/16-intshi. Apho iibhodi ziphela zidibana nodonga, shiya isithuba esinempilo se-1/2-intshi ukuqinisekisa ukuba izinto zinokwanda kwaye zenze isivumelwano ngaphandle kokudibana nodonga. Oku kuyonyusa ubude bexesha lomgangatho kunye nokuthintela ukuqubuda ngeyona ndawo ishushu emini.
Iibhodi zokutshekisha ze-WPC zinokubotshelelwa kwiziphatho zomthi eziphathwayo ngezikrufu okanye izinto zokubopha ezifihliweyo. Sebenzisa izikhonkwane zomgangatho wokudibanisa kubalulekile kuba ziyilelwe ngokukodwa ukunceda ukubamba imathiriyeli kwindawo yayo.
Nangona ibhodi yomgangatho odibeneyo izinzile kunepineyini eqhelekileyo, isenokuqhekeka xa uqhuba izinto zokubopha kufutshane nemiphetho. Imingxunya yokulinga kwangaphambili iyakuthintela ukuba ingenzeki kwaye yenze ufakelo luhambe ngokukhawuleza nangokugudileyo. Endaweni yemingxunya yokuqhuba, abanye abavelisi bacebisa ukubhola umngxunya wokuqalisa malunga ne-1/8 ye-intshi ubunzulu bezinto. Khetha ubungakanani obuncinci obunobubanzi obufanayo nobesisiseko sangaphakathi se-screw kwaye unakekele ukuba ungangeni nzulu kakhulu kuloo nto.
I-Countersink screws kodwa akukho nzulu kunentloko yesikere. Ngaphandle kokudala ukugqitywa okungafunekiyo, ukucwina okunzulu kunokunciphisa ukusebenza kwe-fastener kunye nokushiya iwaranti. Kukwabalulekile ukuba zonke izikrufu zikhuselwe kwinqanaba le-90-degree kwiibhodi. Ukukhawuleza ukusuka kwicala kunokubangela ukuba kuncitshiswe indawo edibeneyo kwaye kumoshe ukugqitywa.
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC nokwadala, WPC decking umgangatho, WPC decking ngaphandle, WPC decking edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC,